सापेक्ष र निरपेक्ष गरिवी वीचको भिन्नता
भिन्नताका आधार सापेक्ष गरिवी निरपेक्ष गरिवी
प्रकृति यो हुने र नहुने वीचको फरक हो । मनिसले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो ।
मापन यसमा गरिवीको रेखा दुई वा सोभन्दा बढी समुहबीच मापन हुन्छ । यसमा गरिवीको रेखामुनिका मानिस भनेर समग्रमा मापन गरिन्छ ।
निवारणको संभावना	 यसलाई पूर्णरूपमा निवारण गर्न सकिदैन ।	 विभिन्न रणनीतिको कार्यान्वयन गरी निवारण गर्न सकिन्छ ।
प्रभाव क्षेत्र	 विकसित र अविकसित दुवै खाले मुलुकमा हुन्छ । खासगरी विकासोन्मुख र अविकसित मुलुकमा हुन्छ ।
गरिवीको मात्रामा न्यूनीकरण तरिका तुलनात्मक रूपमा सामान्य पूनर्वितरण कार्यक्रमबाट घटाउन सकिन्छ । पूनर्वितरणका साथै शसक्तिकरण र पहुँचका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा संचालनको आवश्यक पर्दछ ।
1 Career News and Info चैत्र ८, २०७३
4 थाड (THAAD) के हो ?
5 नमूना स्वास्थ्य गाउँ भनेको के हो ?
8 हनि ट्रयापिङ्ग भनेको के हो ?
9 Climate Change Development Portal के हो ?
10 निजामति सेवा दिवस २०७२